Xog Muhiim ah:Villa Soomaalia oo baabi’ineysa caqabadihii uu Gabra kala dhex dhigay DF iyo maamullada. – Xeernews24
Xog Muhiim ah:Villa Soomaalia oo baabi’ineysa caqabadihii uu Gabra kala dhex dhigay DF iyo maamullada.
Waxaa Villa Somalia ka socda kulamo gaar gaara oo u dhexeeya Madaxda ugu sareysa dalka iyo Hogaamiyayaasha Maamul Goboleedyada dalka, kaa oo lagu baabi’inaayo Caqabadaha uu Jeneraal Gabre kala dhex dhigay DFS iyo Maamul Goboleedyada dalka.
Kulamadaani oo ka duwan kuwa labadii maalin ee lasoo dhaafay ka socday Villa Somalia ayaa waxaa diirada lagu saarayaa sida lagu ciribtiri lahaa dhibaatooyinka ay Dowladaha deriska la’ ah Somalia ka dhex abuureen Dowlada Federaalka iyo Maamulada dalka.
Kulamada ayaa waxaa lagu dhageysanayaa aragtida Madaxda ugu sareysa dalka iyo kuwa Hogaamiyayaasha waxaana leysku dhaafsanayaa rayi saliim ah oo meesha ka saari kara in Dowladaha deriska gacan ku yeeshaan isku soo dhaweynta Madaxda.
Kulamada socda ee ku xeeran ciribtirka kaalinta Dowladaha Shisheeye ee arrimaha Somalia ayaa waxaa qeyb ka ah Madaxweynaha Somalia iyo Ra’isul wasaaraha dalka oo iyagu u istaagay abuurida kalsooni muuqata oo dhexmarta DFS iyo Hogaamiyayaasha.
Madaxda ayaa lasoo warinayaa inay isla fahmeen in leyska iloobo Khilaafyada soo kala dhexgala ee xalintooda ay ka qeybqaatan dowladaha Shisheeye, sida Wakiilkii Ethiopia u qaabilsanaa kala fogeynta Soomaalida Jeneraal Gabre ee laga eryay Somalia.
Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Ra’isul wasaaraha Xukuumada ayaa qaba in Madaxdu aysan ka dhex shaqeyn dowladaha Shisheeye, isla markaana wax waliba ay ku xalistaan miiska korkiisa.
Waxyaabaha leysla soo hadalqaaday ayaa waxaa kamid ah in dalka Somalia uu u baahan yahay isku duubni, isla markaana fiiro gaara loo yeesho faragalinta ay shisheeyuhu ku hayaan Somalia, iyadoo leysku adeegsanaayo Madaxda dalka.
Jeneraal Gabre oo iminka laga eryay dalka ayaa kaalinta koowaad kaga jiray shaqsiyaadka sida ba’an isaga horgeyn jiray Madaxda dalka, waxaana iminka soo baxeysa in Dowlada cusub ay masaxeyso raadadka colaadeed ee uu Gebra uga dhextagay DFS iyo Maamul Goboleedyada dalka.
Gabre ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu sii kala fogeyn jiray Madaxda dalka isagoo adeegsanaayay dhaqaale, waxa uuna iminka sababsaday Siyaasada Dowlada cusub ee ku aadan la dagaalanka Shisheeyaha gacanta kula jira arrimaha Somalia.
Dhinaca kale, qorshaha ay madaxda dalka ku ciribtirayaan faragalinta Shisheeyaha ka dhex shaqeynaaya ayaa soo dadajin karta in Somalia ay ka hanaqaado ficiltanka iyo is qabqabsiga dhanka Siyaasada.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/04/gabre.jpg 169 299 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-04-17 14:33:392017-04-17 14:33:39Xog Muhiim ah:Villa Soomaalia oo baabi’ineysa caqabadihii uu Gabra kala dhex dhigay DF iyo maamullada.
DAAWO Muuqaalka: 15 Qodob oo ay ku heshiiyeen DFS & Maamul goboleedyada... Xog Cusub: Halkee ayuu ku danbeeyay safiirka Imaaraadka ee uu caydhiiyay Madaxweyne...